2007-07-31 @ 16:16 in Ankapobeny
Dia izay tokoa aloha no soratako etoana! mba miala sasatra sy aka rivotra eo amin'ny iray volana mahery eo aho izany...koa raha manoratra aho dia eo amin'ny fandefasana hevitra eo ambany eo ihany. Mametraka ny mandra-pihaona sy mirary soa anareo rehetra. Tsy ahatafavoaka blaogy any amin'ny cyber mihitsy manko aho hatramin'izao fa tonga dia manjavona fotsiny ny takelaka amin'ny fotoana tokony hahafeno azy. Izay no anoratako eo amin'ny hevitra raha misy izay tiana hosoratana!!!
Bye dia Mbola ho avy ô!